Maxaa sabab u ah qulqulka Oromada ee Soomaaliya? | KEYDMEDIA ONLINE
Waxaa 6-dii sano ee la soo dhaafay xad dhaaf noqday Oromada soo beegsaneysa gudaha Soomaaliya, kuwaasoo ka soo qaxaya dhibaatooyinka dhanka qowmiyadaha ee ka jira dalka Itoobiya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Qulqulka qowmiyadda ugu badan Itoobiya ee Oromada ayuu wajahayaa dalka Soomaaliya, waxaana inta la diiwaam galiyey qaxootiga Oromada ee waddanka ku sugan kor u dhaafayaan qiyaastii 10,000, kun oo qof, inkstoo Itoobiya sheegato in ku dhawaad 100,000, kun oo Oromo ah ku noolyihiin bariga iyo waqooyiga Soomaaliya.
Tartanka rabshadaha wata ee u dhexeeya Oromada iyo qoomiyadaha kale ee dariska ah sida Amxaarada, Sidama, Canfarta iyo Soomaalida, ayay bulshada Oramadu waligood dhexda kaga jirtay, taas oo xilliyada abaarta iyo colaadaha ku qasabta in ay baadi goobaan, nolol midda ay ku noolyihiin dhaanta.
Qowmiyadda Oromada oo tiradooda lagu qiyaaso 37 milyan, oo u dhiganta, 34.9% tirda guud ee dadweynaha Itoobiya, kuna nool gobolka ugu weyn dalka, ayaa waligood, si habqan ah u soo galayay xudduudka furan ee Soomaaliya, soo-galootigooda ugu badan ayaana ku sugan Magaalooyinka Hargeysa Iyo Boosaaso.
Marka loo eego, gumeysigii muddada dheeraa ee Amxaarada iyo taliskii 30-ka sano jirsaday ee TPLF, waxa ay bulshada Oromadu aamninsaneyd in loo bartilmaamedsanayo sinji-nacayb, waxaana warbixin ka kooban 96 bog oo soo baxday bishii Disembar 2009, (EPRDF) iyo (TPLF) lagu eedeeyay in ay xireen ku dhawaad ​​20,000 oo Oromo ah, oo ay uga shakiyeen inay xubno ka yihiin OLF.
Sida laga soo xigtay Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan Xuquuqda Aadanaha, waxaa la diiwaan galaiyay kiisaska 594 dil ah oo ay geysteen ciidamada ammaanka ee dawladda Itoobiya iyo 43 qof oo raq iyo ruux la waayey intii u dhaxaysay 2005 ilaa Ogosto 2008, tallaabooyinkaas ayaana lagu macneyn karaa qeyb ka mid ah sababaha Oromadu ugu qulqulayaan Soomaaliya.
Laga soo bilaabo bishii Nofembar 2015, markaas oo ay dalka gilgilen, mowjado mudaharaadyo ah, oo ay hoggaminayeen Oromada, iyo ka dagaallanka gobolka ee Jabhadda The Oromo Liberation Army (OLA), waxa ay qeyb ka mid ah qoysaska dadkoodu jabhadda raacsan yihiin ku qasabtay in ay u soo baxsadaan dhanka Soomaaliya.
Rabshadaha xilligas soo billowday waxa ay sababeen in Itoobiya ay noqoto dalkii ugu badnaa ee dadku guryahooda ka qaxaan adduunka oo dhan sanadkii 2018, iyadoo 1.4 milyan oo qof barakaceen. Dadkaas qeyb ka mid ah waxa ay soo galeen Soomaaliya.
Oromada soo gasha Soomaaliya, qeybtood waa ay shaqeystaan, halka kuwa kalana ay ka dawarsadaan degaannada ay soo beegsadeen, iyadoo ay weli taagan tahay faquuqa ay kala kulmayaan qaar ka mid ah Soomaalida.
Qayb ka mid ah, soo-galootiga Oromada ayaa dib ugu laabtay dhulkooda, kadib markii ay la qabsan waayeen nolosha Soomaaliya, waxaase jira kuwa uu sanadkii tagay qasab ku celiyey Maamulka Somaliland, kadib markii shacabka degaannada Somaliland ay ku eedeeyeen kiisas la xiriira afduub loo gaystay caruur Soomaaliyeed.
Dadka qaarkood ayaa sheegaya in Oromadu ay qaateen fursadihii shaqo ee ay ka faani jireen dhallinta, kuwaasoo ay iminka Oromadu qabtaan isla-markaana ay lacag ka sameyaan, waana arrin ka mid ah waxyaabaha lagu duro, oo ay aad uga caroodaan.
Oromada iyo Soomaalida waxa ay ku wada nool yihiin laba gobol oo xuduud aad u dheer wadaaga gudaha Itoobiya, iyagoo sidoo kalana wadaaga daaqa dhulka iyo arrimaha ganacsiga, taasoo soo cel celisa dirirta dhex marta iyaga iyo Soomaalida, waana mid saameyn weyn ku yeelata Qaxootiga Oromada, iyagoo mar walba sheega in waxa ka socda Itoobiya aanay waxba ka ogayn, oo ay yihiin dad nolol raadis ah.
Inkastoo Oromada qeyb ka tahay qoymiyadaha isku tagay ee Itoobiya, kuwaas oo loo diwaan galaiyay cadowga ugu weyn ee Soomaalida, hadana Qoymiyadda Oramadu waxa ay Soomaalida la wadaagtaa dhalashada Kushitigga (ama Kuush), waxayna labaduba Luuqadaha Kushitiga la wadaagaan dalalka Jabuuti iyo Eritrea, qeyb ka mid ah bulshada laga badan yhaay, Sudan, Koonfurta Sudan, Masar, Tanzania iyo Kenya.
Waxaana shucuubta Luuqadaha Kushitiga adeegsata ka mid ah, Canfarta, Beja, Oromo, Soomaali, Amxaaro, Tigraay (Tigray-Tigrinya), Gurage, iyo Dadka Sidama iyo kuwa kale oo badan.